Ọrtọm: Ndi na-achị ehi na ehi ha bụzị “aka-akpa-n’isi” na Naịjiriya – hoo!haa!!
BOBRISKY NWERE ÍSÌ ỌJỌỌ N'AHỤ - JP BLUSH
ỤKA AJỤWO ILI ONYE OTU HA JI ỤGWỌ "TITHE"
SARS EGBUOLA ONYE ỌGBA BỌL REMO STARS
Ọrtọm: Ndi na-achị ehi na ehi ha bụzị “aka-akpa-n’isi” na Naịjiriya
Makurudi: Samụel Ọrtọm, Aka na-achị Benuwe Steeti sịrị na ọ dịka ndi na-achị ehi nakwa ehi ha nwekwuziri iwu aka-akpa- n’isi (immunity) nke ọ bụ sọọsọ Onyeisala n’Osote ya nwere site n’usoro iwu ala Naịjiriya.
Gọvanọ a kwuru nkea maka okwu Mansur Dan Ali bụ Mịnịsta nta na-ahụ maka Nchekwa.
Mazị Dan Ali sịrị na ọ bụ iwu machiri ịchịgharị ehi bụ mere ndi na-achị ehi ji egburu mmadụ aghara aghara n’ala anyị gbaa gburu gburu.
“Ndi a na-achị ehi bụ ndi naịjiriya. Ọ dịkwa ka mmadụ ịbịa nọchie ikpere mmiri ala anyị, o nwere isi?
Gọvanọ Ọrtọm sịrị na okwu ahụ bụ “mkparị nye ụmụ amala Naịjiriya”. Ọ kwara arịrị na ehi kazị Gọọmentị Etiti mkpa karịa ndụ mmadụ.
” Agaghị m ewere ala m nyefee onye ọbịa. I nwere ike ime otu ahụ na steeti nke gi. Ọ dị mwute na ndi kwesịrị ịna adụ onyeisiala ndụmọdụ anaghị eme nkea, kama ha na edughie ya ụzọ maka ihi ihe ha ga-erite.
“Dịka steeti, anyị dị nkwadebe ịnabata ndi obi ha dị ọcha, bịakwaranụ steeti anyị n’ụzọ ziri ezi, tinyere ndi mba ọzọ. Mana, ị nọrọ na Benuwe, ị ga-akwanyelata iwu anyị ugwu.
“Okwu ahụ bụ mkparị nyere izugbe ndi ọchịchị nile nakwa ndi Naịjiriya nile, mịnịsta na-ahụ maka nchekwa ịgwa ndi Naịjiriya ka ha nabata ndi mbaọzọ ndi zopbatara ezobata bịa na-ebute ọgbaghara”
“A hụzịrị m na iwu aka-akpa-n’isi nke na-ekpuchi sọọsọ Onyeisiala, Osote Onyesisiala, Gọvanọ nakwa Osote ya, kpuchizikwuru ndi na-achị ehi, ndi ogbu ọchụ nakwa ehi ha. Na Naịjiriya taa, ehi kazị madụ nwee ikike. Ọ jọgburu onwe ya.”
Previous Post: Ányà
Next Post: MADỤ/ONYE